Instasave अनलाइन - इन्स्टाग्राम भिडियोहरू, फोटोहरू, रिलहरू, कथा, IGTV 2022 डाउनलोड गर्नुहोस् - InstaSave
प्राथमिक नेभिगेसनमा जानुहोस्
प्राथमिक साइडबारमा जानुहोस्
इन्स्टाग्राम स्टोरी, भिडियो, रिल र फोटोहरू HD मा डाउनलोड गर्नुहोस्
Instasave अनलाइन - इन्स्टाग्राम भिडियोहरू, फोटोहरू, रिलहरू, कथा, IGTV 2022 डाउनलोड गर्नुहोस्
करिब एक अर्ब मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको साथ, इन्स्टाग्राम विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो। यो एक अनलाइन मोबाइल फोटो-साझेदारी, भिडियो-साझेदारी, र सामाजिक सञ्जाल सेवा हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तस्बिर र भिडियोहरू लिन र एपमा सार्वजनिक वा निजी रूपमा साझेदारी गर्न सक्षम बनाउँछ।
इन्स्टाग्राम लिङ्क प्रविष्ट गर्नुहोस्
डाउनलोड लिङ्कहरू तयार गर्दै...
अन्य सबै सामाजिक मिडिया अनुप्रयोगहरू जस्तै, इन्स्टाग्रामले प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता र सुरक्षालाई जोड दिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूको अधिकारलाई मान्यता दिँदा, आधिकारिक इन्स्टाग्राम एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई इन्स्टाग्राम स्टोरीहरू, फोटोहरू र भिडियोहरू सीधै आफ्नो फोनको मेमोरीमा सेभ वा डाउनलोड गर्न अनुमति दिँदैन।
जे होस्, त्यहाँ सबै चीजको लागि ह्याकहरू छन्, र उही इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूको लागि जान्छ। सरल शब्दहरूमा, केही एपहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू, छविहरू, रिलहरू, र अन्य मल्टिमिडिया सामग्रीहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
अन्य उपलब्ध विकल्पहरू मध्ये, इन्स्टा सेभ असीमित इन्स्टाग्राम भिडियोहरू, छविहरू, र अन्य सामग्रीहरू डाउनलोड गर्नको लागि उत्तम र नि:शुल्क समाधान हो। एपले तपाईंलाई इन्स्टाग्राम छविहरू, भिडियोहरू, आईजी टिभी, एल्बमहरू, मल्टिमिडिया र रिलहरू भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ गुणस्तरमा सम्झौता नगरी।
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ
इन्स्टा सेभ एप कसरी काम गर्छ?
इन्स्टा सेभ एप विशेष भिडियोहरू, अडियोहरू, वा Instagram बाट छविहरूलाई तपाईंको फोनको ग्यालरीमा बुकमार्क गर्न प्रयोग गरिन्छ। एपले इन्स्टाग्राम लिङ्कलाई डाउनलोड गर्न मिल्ने लिङ्कमा व्यवस्थित रूपमा इम्बेड गर्दछ। यद्यपि, प्रयोगकर्ताहरूले एपलाई तपाईंको ग्यालेरीमा पहुँच गर्न अनुमति दिन म्यानुअल अनुमति दिनु पर्छ।
इन्स्टा सेभ एपको कम्प्याटिबिलिटी मापदण्ड के हो?
A: अनुप्रयोगलाई एन्ड्रोइड 4.1 र माथिको आवश्यकता छ र भण्डारणमा पहुँच गर्न आवश्यक छ। साथै, मोबाइल उपकरणमा न्यूनतम 1GB RAM हुनुपर्दछ र स्मार्टफोन/iPhone हुनुपर्छ। साथै, एप कम्प्युटर र पीसीहरूसँग पनि उपयुक्त छ।
के यो मेरो यन्त्रमा Insta बचत एप प्राप्त गर्न कानूनी छ?
A: हो, Insta Save एउटा कानुनी एप हो। जबकि यो Google Play र Apple App Store जस्ता स्टोरहरूमा उपलब्ध छ, यो कुनै पनि अन्य ब्राउजर एक्सटेन्सन वा एप जस्तै तेस्रो-पक्ष एप हो जसले इन्स्टाग्रामका चित्रहरू, भिडियोहरू, रिलहरू, र अन्य मनोरञ्जन सामग्रीहरूको असीमित डाउनलोड उपलब्ध गराउने दाबी गर्दछ।
इन्स्टा सेभ एप के हो
एक मिनेट लिनुहोस् र कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम फिड मार्फत तल स्क्रोल गरिरहनु भएको छ र केहि आकर्षक देखिन्छ। आफ्नो फोनमा स्क्रिनसट लिनुको सट्टा, तपाईं यसलाई तुरुन्तै बचत गर्न चाहनुहुन्छ। यस बीचमा, तपाईंले महसुस गर्नुभयो कि इन्स्टाग्रामले प्रत्यक्ष डाउनलोडहरूलाई अनुमति दिँदैन, त्यसैले तपाईं यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ।
यस्तो अवस्थामा, Insta Save Live तपाईको मनपर्ने छवि, भिडियो, वा मल्टिमिडिया सिधै फोनको मेमोरीमा डाउनलोड वा सुरक्षित गर्नको लागि अन्तिम विकल्प हुनेछ। अचम्मको कुरा, भिडियो वा छविको गुणस्तर अपरिवर्तित रहन्छ।
नि:शुल्क इन्स्टा डाउनलोडिङ सुविधाहरू बाहेक, इन्स्टा सेभले नेभिगेट गर्न सजिलो मेनु र सरल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस प्रदान गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले भिडियो डाउनलोड गर्न तीन चरणहरू पालना गर्नुपर्नेछ: इन्स्टाग्राम खोल्नुहोस्, तपाईंले डाउनलोड गर्न चाहनुभएको छवि वा भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, र यसलाई प्राप्त गर्न इन्स्टा सेभ डाउनलोड आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
यसबाहेक, यो एक फ्री-टु-डाउनलोड उपकरण हो, र तपाईंले यसलाई हाम्रो वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेपछि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यस उपकरणको प्रिमियम सुविधाहरू अनलक गर्न कुनै साइन-अप वा दर्ता आवश्यक पर्दैन। केवल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड सुरु गर्नुहोस्।
इन्स्टा बचत एप सुविधाहरू
इन्स्टा सेभले अन्य इन्स्टाग्राम डाउनलोडिङ उपकरणहरूलाई यसको उच्च-टेक तर प्रयोगकर्ता-अनुकूल सुविधाहरू र कार्यक्षमताहरूको कारणले पछि पार्छ। सबै भन्दा माथि, यो एक नि: शुल्क डाउनलोडिंग एप हो, जसको मतलब यो एपलाई यसको पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न कुनै सदस्यता वा स्थापना शुल्क आवश्यक पर्दैन।
यसबाहेक, प्रयोगकर्ता-सुविधा यो एपको अर्को विशिष्ट विशेषता हो। तीन-चरण डाउनलोड प्रक्रियाले कुनै प्राविधिक पृष्ठभूमि नभएका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि इन्स्टाग्राम भिडियोहरू, छविहरू र रिलहरूको द्रुत र सहज बचत गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रयोग गर्न नि: शुल्क एप
इन्स्टा सेभ प्ले स्टोरमा नि:शुल्क डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ। अन्य एपहरूको विपरीत, यस एपका प्रिमियम सुविधाहरू पहुँच गर्न कुनै लुकेको वा सदस्यता शुल्कहरू छैनन्। प्रयोगकर्ताहरूले एक पैसा खर्च नगरी पूर्ण इन-एप सुविधाहरूको मजा लिन सक्छन्।
एकचोटि तपाईंले इन्स्टा सेभको मूल संस्करण डाउनलोड गरेपछि, डाउनलोड गर्ने मात्रामा कुनै प्रतिबन्ध छैन। तपाईं बिना समस्या बिना असीमित भिडियोहरू, छविहरू, रीलहरू, र अन्य मल्टिमिडिया सामग्रीहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
नेभिगेट गर्न सजिलो मेनु
इन्स्टा एपको अर्को आकर्षक विशेषता भनेको यसको इजी-टु-नेभिगेट मेनु हो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई समय बर्बाद नगरी आफ्नो मनपर्ने मल्टिमिडिया फेला पार्न र डाउनलोड गर्न मद्दत गर्न खोजी पट्टी सुविधा दिन्छ। तपाईंले केवल भिडियो वा छवि खोल्नु पर्छ र यसको लिङ्क ठेगाना प्रतिलिपि गर्नुपर्छ। अब खोज पट्टीमा लिङ्क टाँस्नुहोस् र डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
कुनै दर्ता वा साइन अप छैन
यसबाहेक, एपले प्रयोगकर्ताहरूको लागि दर्ता वा साइन अपको माग गर्दैन। तपाईंले एप डाउनलोड गरेर आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुपर्छ। जब तपाइँ इन्स्टा मल्टिमिडिया डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ यसलाई खोल्नुहोस् र यसलाई प्रयोग गरेपछि बन्द गर्नुहोस्।
तीन-चरण सजिलो डाउनलोड
प्रयोगको सहजता इन्स्टा सेभ एपको अर्को प्रमुख विशेषता हो। डाउनलोड प्रक्रिया पूरा गर्न प्रयोगकर्ताहरूले तीन चरणहरू पालना गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा पहिले, तपाईंले Instagram बाट डाउनलोड गर्न चाहनुभएको छवि वा भिडियो खोल्नुहोस्। यसको लिङ्क प्रतिलिपि गर्नुहोस् र एपको खोज बाकसमा टाँस्नुहोस्। अन्तमा, डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ।
छिटो र गुणस्तर डाउनलोड
इन्स्टा सेभ बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा छिटो इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्ने एपहरू मध्ये एक हो। यद्यपि, एपको समग्र कार्यसम्पादन तपाईको इन्टरनेटको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ। साथै, छविहरू र भिडियोहरूको गुणस्तर मूल इन्स्टाग्राम पोस्टमा उपलब्ध जस्तै रहन्छ।
कसरी इन्स्टा सेभ मार्फत इन्स्टाग्राम फोटोहरू डाउनलोड गर्ने
ठिक छ, इन्स्टाग्राम तपाईको फोटोग्राफी सीपहरू देखाउनको लागि उत्तम ठाउँ हो। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, मानिसहरूले इन्स्टाग्राममा दैनिक 50-मिलियन छविहरू साझा गर्छन्। इन्स्टा सेभको साथ, तपाईले सकेसम्म धेरै छविहरू डाउनलोड र बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
एपले तपाईंलाई उपलब्ध उच्चतम रिजोल्युसन गुणस्तरका छविहरू डाउनलोड गर्न सक्षम बनाउँछ। यसबाहेक, इन्स्टा सेभ एप मार्फत इन्स्टाग्राम छविहरू डाउनलोड गर्न यो एकदम सरल छ। तपाईलाई केवल छविमा क्लिक गर्न आवश्यक छ, यसको लिङ्क प्रतिलिपि गर्नुहोस् र यसलाई तपाईको फोनको मेमोरीमा स्थानान्तरण गर्न खोज बाकसमा टाँस्नुहोस्।
सबै भन्दा पहिले, इन्स्टा बचत उपकरण डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई लन्च गर्नुहोस्
अब तस्विर वा भिडियो चयन गर्नुहोस्, तपाईं Instagram बाट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ
त्यसपछि, ठेगाना पट्टी वा मेनुको लागि लिङ्क प्रतिलिपि गर्नुहोस्
एपको इनपुट बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र प्रतिलिपि गरिएको लिङ्क टाँस्नुहोस्
डाउनलोड गर्न मिल्ने फोटो लिङ्कमा आधिकारिक इन्स्टाग्राम फोटो लिङ्क लुकाउन डाउनलोड बटनमा ट्याप गर्नुहोस्
अन्तमा, डाउनलोड सुरु गर्न डाउनलोड लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्
कसरी इन्स्टा सेभ एप मार्फत इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने
इन्स्टाग्राम अचम्मको र आकर्षक भिडियोहरू फेला पार्नको लागि यस्तो उत्कृष्ट ठाउँ हो। दुर्भाग्यवश, कडा प्रयोगकर्ता नीतिले तपाईंलाई इन्स्टाग्राम भिडियोहरू सिधै तपाईंको फोनको मेमोरीमा डाउनलोड गर्न अनुमति दिँदैन, र तपाईं यसको बारेमा धेरै गर्न सक्नुहुन्न।
इन्स्टाग्राम भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि तिनीहरूको मूल गुणस्तरमा सम्झौता नगरी र इन्स्टाग्राम गोपनीयता नीतिलाई बाइपास गर्ने उत्तम विकल्प भनेको इन्स्टा सेभ एप हो। यो एपले तपाईंलाई इन्स्टाग्राम भिडियोहरूलाई MP4 मा रूपान्तरण गर्न र तिनीहरूलाई बिना झन्झट डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
कम्प्युटर/पीसीबाट इन्स्टा सेभ कसरी डाउनलोड गर्ने
इन्स्टा सेभ एपको अर्को प्रमुख विशेषता अनुकूलता विशालता हो। हाई-टेक कोडिङको प्रयोगको कारणले गर्दा, एपले एन्ड्रोइड मोडेलहरू, आईफोनहरू र कम्प्युटर/पीसीहरूमा पनि समान रूपमा काम गर्छ। प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न ब्राउजर वा विन्डोज भएका कम्प्युटरहरूमा इन्स्टा सेभ एप स्थापना र प्रयोग गर्न सक्छन्।
कम्प्युटर/पीसीहरूमा इन्स्टा सेभ एप डाउनलोड गर्ने र चलाउने प्रक्रिया सरल छ। तपाईंले पूर्वनिर्धारित ब्राउजरमा जानुपर्छ र आधिकारिक इन्स्टा सेभ एप खोज्नुपर्छ। यसलाई फेला पारेपछि, डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र इन्स्टाग्राम चित्रहरू, भिडियोहरू, रिलहरू, र अन्य असीमित मल्टिमिडिया डाउनलोड गरेर आनन्द लिनुहोस्।
आफ्नो यन्त्रमा आधिकारिक इन्स्टा सेभ एप डाउनलोड गर्नुहोस्
आफ्नो पूर्वनिर्धारित ब्राउजरमा इन्स्टाग्राम खोल्नुहोस्
इन्स्टाग्राम पोष्टमा क्लिक गर्नुहोस् र ठेगाना पट्टीबाट लिङ्क/URL प्रतिलिपि गर्नुहोस्
अब, डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
अन्तमा, माउसको दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र सेभ लिंक as as… चयन गर्नुहोस् (तपाईले चाहेको मल्टिमिडियाको डाउनलोड सुरु गर्न डाउनलोड बटन ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ)
इन्स्टाग्रामबाट IGTV भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
IGTV भिडियोहरू शायद इन्स्टाग्रामको सबैभन्दा मनोरञ्जनात्मक भाग हुन्। यो सुविधा पूर्ण रूपमा इन्स्टाग्रामको स्वामित्वमा छ, जसको मतलब इन्स्टाग्राम मार्फत सीधै तपाईंको फोनमा IGTV भिडियोहरू डाउनलोड वा बचत गर्ने कुनै मौका छैन।
यद्यपि, इन्स्टा सेभ एक मात्र उपकरण हो जसले तपाईंलाई आफ्नो एन्ड्रोइड वा आईफोन उपकरणहरूमा आधिकारिक IGTV भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। तल उल्लेख गरिएको एक गाइड हो जसले तपाईंलाई इन्स्टा सेभ एप मार्फत इन्स्टाग्रामबाट IGTV भिडियोहरू डाउनलोड गर्न मद्दत गर्नेछ।
इन्स्टाग्राम एप खोल्नुहोस् र IGTV भिडियोहरूमा जानुहोस् (तपाईं डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ)
IGTV भिडियोको लिङ्क प्रतिलिपि गर्नुहोस्
अब, मेनु बारमा लिङ्क टाँस्नुहोस्
डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, र यसले स्वचालित रूपमा भिडियो डाउनलोड गर्नेछ
आफ्नो एन्ड्रोइडमा इन्स्टाग्राम फोटो/आईजीटीवी/भिडियो/रील्स डाउनलोड गर्नुहोस्
आजकल, अधिकांश मानिसहरूले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्छन्। यदि तपाइँ ती मध्ये हुनुहुन्छ र तपाइँको एन्ड्रोइड फोनहरूमा Instagram Photos/IGTV/Videos/Reels डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तब इन्स्टा सेभ एप उत्तम विकल्प हो।
एपले 4.0 र माथिका एन्ड्रोइड मोडेल र उपकरणहरूसँग पूर्ण रूपमा काम गर्दछ। यद्यपि, यसले पुराना एन्ड्रोइड मोडेलहरूमा स्थापना समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। यसबाहेक, तपाईंले आफ्नो फोनमा इन्स्टा सेभ एपको सही काम गर्ने सुनिश्चित गर्नको लागि आधिकारिक इन्स्टाग्राम एप स्थापना गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले, स्थापना गरिएको इन्स्टाग्राम एप खोल्नुहोस्
आफ्नो मनपर्ने इन्स्टाग्राम पोष्ट छान्नुहोस् (छवि, भिडियो, रिल्स आदि)
अब, माथिल्लो दायाँ कुनामा, थ्री-डट्स विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्
त्यसपछि, प्रतिलिपि लिङ्क विकल्प चयन गर्नुहोस्
लिङ्क प्रतिलिपि गरेपछि, इन्स्टा डाउनलोडर एपमा URL टाँस्नुहोस्
Download Now बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
पर्खनुहोस्, जबसम्म मूल इन्स्टाग्राम लिङ्क डाउनलोड योग्य लिङ्कमा रूपान्तरण हुँदैन
इन्स्टा सेभ एप मार्फत आफ्नो आईफोनमा इन्स्टाग्राम फोटो/आईजीटीभी/भिडियो/रील्स कसरी डाउनलोड गर्ने
तपाईंको आईफोनहरूमा इन्स्टाग्राम फोटोहरू/आईजीटीभी/भिडियोहरू/रीलहरू डाउनलोड गर्न गाह्रो हुन सक्छ, विशेष गरी जब तपाईंसँग इन्स्टा सेभ जस्ता प्रामाणिक डाउनलोड गर्ने एपको अभाव हुन्छ। एप आईफोन मोडेल र उपकरणहरूको विस्तृत दायरासँग उपयुक्त छ।
प्रयोगकर्ताहरूले एप्पल स्टोरबाट इन्स्टा सेभ एप डाउनलोड र इन्स्टल गर्न सक्छन्। त्यसो गरेपछि, आधिकारिक इन्स्टाग्राम एप खोल्नुहोस् र डाउनलोड गर्न इच्छित छवि वा भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। अब, यसलाई आफ्नो फोनको मेमोरीमा थप्न डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
स्थापना गरिएको इन्स्टाग्राम एप खोल्नुहोस्
आफ्नो मनपर्ने इन्स्टाग्राम पोस्ट चयन गर्नुहोस् (छवि, भिडियो, रिल्स आदि)
इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दा तपाईंको आफ्नै पोष्ट कसरी बचत गर्ने
इन्स्टा सेभ एपले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दा आफ्नो पोस्टको प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न पनि अनुमति दिन्छ। यो सुविधा तस्विरहरूमा सीमित छैन, किनकि तपाइँ यस एप मार्फत असीमित भिडियोहरू, रिलहरू, र अन्य सामग्रीहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
यसबाहेक, इन्स्टा सेभ एप मार्फत डाउनलोड गरिएका पोस्टहरूको प्रतिलिपि स्वचालित रूपमा तपाईंको फोनको आन्तरिक मेमोरीमा सुरक्षित हुन्छ। यसबाहेक, तपाईले डाउनलोड गरिएको प्रतिलिपिलाई विभिन्न अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा सजिलैसँग साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो Instagram प्रोफाइल खोल्नुहोस्
खोज्नुहोस् र विकल्प आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् (Android मा ह्याम्बर्गर मेनु र IOS मा सेटिङ आइकन)
"अन" मा मूल फोटो सेटिङहरू बचत सक्षम गर्नुहोस्
त्यसो गरेपछि, तस्बिर र भिडियोहरू सहित तपाईंका मूल पोस्टहरू स्वचालित रूपमा तपाईंको फोनमा सुरक्षित हुनेछन्
के एन्ड्रोइड/आईफोनमा इन्स्टा सेभ एप डाउनलोड गर्न सुरक्षित छ?
पहिलो कुरा, आफ्नो यन्त्रमा Insta-Save एप प्राप्त गर्ने बारे चिन्ता नगर्नुहोस्। यो 100% सुरक्षित र कानूनी छ। र एप अब गुगल प्ले स्टोरमा नि:शुल्क उपलब्ध छ र जुनसुकै प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गर्न सक्छन्। महत्त्वपूर्ण रूपमा, इन्स्टा-सेभले तपाईंको उपकरणमा कुनै मालवेयर पठाउँदैन।
यद्यपि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको यन्त्रमा यसको अनुमति बिना वा प्रयोगकर्ता सम्झौताको उल्लङ्घन नगरी तपाइँको यन्त्रमा एपहरू स्थापना गर्ने जस्ता कुनै पनि गल्तीहरूमा संलग्न हुनुहुन्न। यसबाहेक, एक प्रामाणिक स्रोतबाट इन्स्टा सेभ एप डाउनलोड गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
यो वेबसाइट खोज्नुहोस्
10insta - डाउनलोड गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम भिडियोहरू/रील्स/छविहरू अनलाइन नि:शुल्क - InstaSave
W3toys इन्स्टाग्राम - इन्स्टाग्राम अनलाइन मा सबै डाउनलोड गर्नुहोस् - InstaSave
फेसबुक रिल्स भिडियो डाउनलोडर HD गुणस्तरमा - एन्ड्रोइड र आईफोन
स्टोरी सेभर इन्स्टाग्राम - इन्स्टा स्टोरीज र हाइलाइटहरू डाउनलोड गर्नुहोस् - (एन्ड्रोइड र आईफोन)
भिडियो सेभर इन्स्टाग्राम - इन्स्टा भिडियो/छवि/रिल र कथा डाउनलोड गर्नुहोस्
GB इन्स्टाग्राम APK डाउनलोड v5.4 नवीनतम संस्करण - Anti Ban 2022
इन्स्टा डीपी डाउनलोडर र इन्स्टाग्राम डीपी दर्शक
Instagram Reels to MP4 कनवर्टर अनलाइन नि: शुल्क - चरण-दर-चरण गाइड - InstaSave
इन्स्टाग्राम प्रोफाइल तस्वीर डाउनलोडर HD | इन्स्टा डीपी दर्शक | Insta DP - InstaSave
इन्स्टाग्राम रिल्स डाउनलोडर - इन्स्टा रिल भिडियोहरू अनलाइन नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © २०२२ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस | DMCA | गोपनीयता नीति | नियम र सर्तहरू